I-PT-141 (i-Bremelanotide): Imithi emisha yayisetshenziselwa ukungasebenzi komzimba ngokobulili
I-2. Isebenza kanjani?
I-3. Isicelo se-PT-141
I-4. Zonke Izinzuzo ze-PT-141
I-5. I-PT-141 ye-Dysfunction ngokocansi
I-6. Indlela yokusebenzisa i-PT-141
I-7. Ukwabelana ngokuhlanganyela ngabasebenzisi be-PT-141
I-8. Izingozi Emva kokusebenzisa i-PT-141
Ukuze isithuthukisi sezocansi esivusa ukuvusa kwabesifazane phakathi nemizuzu yokuphatha, i-PT-141 yiyona into yangempela. I-Bremelanotide kuvela I-Melanotan II; ngakho-ke, inikeza imiphumela efanayo ye-aphrodisiac. I-Melanotan II nayo isiza ekunikezeni isikhumba sokuhlunga isikhumba kanye nokwelapha izifo zobulili, kufaka phakathi isifiso esingathandeki kubantu besifazane.
I-peptide ye-PT-141 ayitholakali emzimbeni ngokwemvelo njengamanye ama-hormone okukhula. I-PT-141 (189691-06-3) ukuba i-agonist engakhethi ye-melanocortin receptors iye yasetshenziselwa ukwelashwa kwezifo zobulili isikhathi esithile.
Ukutholakala kwe-PT-141 njengenye ye izithuthukisi zocansi kuyamangalisa njengoba kwenzekile ngengozi. Usosayensi owaziwa ngokuthi yi-Mac Hadley wazivotela njengesibonelo futhi njengoba ezama umzimba wakhe waqala ukusebenza amahora ayisishiyagalombili ngokuqondile. Kwakuwumphumela wokuba nomthamo ophindwe kabili kaMelatonin II, isakhi esasitholwe ekuqaleni.
Ukuhlolwa kwe-Melanotan kwenzelwa kuqala kumagundane kuma-1960 futhi yaqhubeka eya kuma-1980. I-Melanocortins yaziwa ngokudlala indima ebalulekile ekulawulweni kwemisebenzi eminingi yempilo. I-Melanotan 1, okuyi-analog e-Melanocortin, ihlolwe njenge-agent yokuthungula ngenkathi i-Melanotan II ivivinywa njenge-agent yokuhlukumeza ngokocansi.
Nokho, ukusetshenziswa kwalo kwakunqanyuliwe ngemuva kokuthi kutholakale ukuthi kwande ukwanda kwengcindezi yegazi yezihloko zayo zokuhlolwa. Ku-2016, i-peptide ye-PT-141 ivunyiwe yi-FDA njengokwelashwa kokuhlukumeza ngokocansi kwabesifazane.
2. Isebenza kanjani?
I-PT-141 isebenza nge-hypothalamus, ngokuqondile eholele ekukhuleni kwesifiso sobulili. Kubophezela kumamukeli we-melanocortin atholakale ebuchosheni, ngaleyo ndlela athumele imiyalezo emithanjeni ezithombeni zobulili. Ngokungafani nezinye izithako zobulili njenge-Viagra, ezisebenza ohlelweni lwezinsiza, i-PT141-141 ithinta ngokuqondile i-libido yomuntu. Yingakho abanye imithi yokwelapha akufanele kubhekwe njengama-aphrodisiacs njengoba bengathinti isifiso somuntu ngokuqondile.
I-PT-141 isebenza ngokugqugquzela futhi kusebenze i-hormone ye-dopamine, eyaziwa ukuthi idlala indima ebalulekile ekwandiseni isisusa somuntu ngesisusa. I-Dopamine yinkimbinkimbi eyaziwayo engumqondo we-neurotransmitter futhi inendima yakhe ukugqugquzela ukusebenza. Uma umuntu enamazinga aphansi e-dopamine, kusho ukuthi i-libido yabo izoba iphansi. Isikhathi sehhafu se-PT-141 siseduze nemizuzu ye-120.
♣ I-PT-141 i-sprays yama-nasal
♣ PT-141 izicucu
♣ PT-141 amaphilisi
4. Zonke Izinzuzo ze-PT-141
♦ Ithuthukisa ukwaneliseka ngokocansi
Ingabe unesinye isikhathi, wazibuza ukuthi ungenzenjani ukuze uthole ukwaneliseka ngokocansi? Iqiniso ngezinye izikhathi kuthatha okungaphezu nje kokuya ocansini ukufeza enkulu 'O.' Ubulili bungakunika ama-orgasms kodwa hhayi njengengqondo ehlabayo njengoba kufanele. Kulabo besifazane, kufinyelela kunzima nakakhulu uma kuqhathaniswa namadoda ngenxa ye-anatomy yabo.
Ukubaluleka kokusebenzisa izithuthukisi zocansi ekubangela ama-orgasms akukwazi ukunqunywa. I-PT-141 yabesifazane unikeza imizwa ejulile yokwaneliseka uma umuntu ehlanganyela ocansini. Uma ubheka okuthile okuwusizo ukwandisa injabulo yakho yocansi, lesi sidakamizwa esimangalisayo siwukuthi ukubheja okuqinisekile.
♦ Inikeza amandla amaningi
Ungaba ne-high drive drive kodwa awukho amandla okukwenza. Ukungabi namandla akuthinti kuphela impilo yakho yobulili kodwa imisebenzi yakho yansuku zonke nempilo. Lokhu kusho ukuthi ngeke usathokoze ngokuhlanganyela eminye yemisebenzi oyikhonzile ngakho-ke ungasebenzi.
Ukungabi namandla akusho ukuthi impilo yakho yobulili iphelile. Asikho isidingo sokukhathazeka njalo ngoba kukhona indlela ongathola ngayo ukuthuthukiswa kwamandla kanye nemizwa yakho yobulili.
Uma usebenzisa i-PT-141, uzobona ukuthi uthola amandla amaningi futhi uzizwa uncane kakhulu.
♦ Thuthukisa ukuzethemba ngokocansi
Esinye sezici ezibalulekile esinquma ukuthi uzothola ukwaneliseka ngokocansi kungukuqiniseka kwakho kuwe. Ukuzethemba ngokocansi kuyisiqiniseko osithola ukuthi ungabulala embhedeni. Ngokwesibonelo, uma kwenzeka ohlangothini lwakho olwedlule lwezocansi wena nomngane wakho womshado uthola ama-orgasms asendle, cishe uzozuza ukuqiniseka ukuthi uye wazi kahle ubuciko.
Ngenye yezimfanelo ezimbi kakhulu umuntu angaba nazo. Uma unethemba eliphezulu embhedeni, konke okuhlangenwe nakho kungenzeka kujabulise kunalokho kakade. Ngaphezu kwalokho, kukwenza ukhululeke ngokwengeziwe uma ulala ocansini.
Kubantu abaningi, ukuzethemba ngokobulili akuyona into elula ukuyifinyelela ngoba mhlawumbe bacabanga ukuthi ubuthakathaka babo buye babuthatha. Uma ukuzethemba kwakho kuphansi, ukufeza i-orgasm kuba yinto enkulu. Inzuzo ezayo nokusetshenziswa kwabathuthukisi bezocansi ukuthi yenza kube nokuhlangenwe nakho okwanelisayo ngokocansi.
I-PT-141 ye usebenzisana nazo zonke izinkinga zakho zobulili ngakho-ke ukunika konke ukuzethemba owake wakudingayo. Abesifazane abanethemba lokuzibandakanya ngokocansi baziwa ukuthi banesisindo somzimba ocansini futhi bajabule nakakhulu embhedeni. Akumangalisi ukusetshenziswa kwe I-PT-141 yabesifazane kwanda nsuku zonke. Uma usebenzisa i-PT-141, ngiyathembisa ukuthi ukuzethemba kwakho ngokocansi kuzokwandisa kakhulu ngesikhathi esifushane kunokwenzeka.
♦ Ukwandisa i-libido yomuntu nesifiso socansi
Uyazi ukuthi ubukeka ukuthi umlingani wakho uyakunikeza uma ubuthongo obuthakathaka noma ubuhlungu bekhanda ukuze ugweme ucansi. Kuyakhathazeka ngisho nakakhulu uma omunye wakho obalulekile ekulungele, kepha lokho kuyinto yokugcina ongayicabangela. Lokho kungabangela ubuhlobo bakho, ikakhulukazi uma izinto ziye zaba mnandi eminyakeni edlule.
Namuhla, ngaphezu kwe-30% yabesifazane abahlukunyezwa ngesifiso sobulili emhlabeni jikelele. Isizathu esenza lokhu kube yinto evamile kakhulu kwabesifazane ukuthi izici eziningi zifaka isandla kulo. Nakuba amazinga e-estrogen aphansi noma ukuguqulwa kokukhiqizwa kwe-hormone ezinye zezizathu ezenza isifiso somuntu wesilisa singathatha isinyathelo sangemuva, amaphilisi okulawula ukuzalwa, izinkinga zobudlelwano, ukukhathala, ukucindezeleka, ukucindezeleka, kanye neminye imithi ingase iholele kuyo.
Uma uqaphela ukuthi isithakazelo sakho kwezocansi siba sehla ngosuku, lokho kungaba uphawu lwe-hypoactive sex disorder disorder. Into enhle ukuthi i-PT-141 yokwehlukana ngokocansi ingasiza ekuqedeni lokhu. Iqinisekisa ukuthi uthola umzimba ogcwele futhi uvulwe njalo.
♦ Tans isikhumba
Namuhla ukukhanda isikhumba sekuye kwadumile. Ezinsukwini zokuqala, isikhumba sesikhumba sasibonakaliso sokuthi umuntu usebenza ngaphansi kwelanga amahora amaningi. Namuhla, i-skin tan ibhekwa njengalabo abathanda ukuchuma nokukhanya okuphilile. Ngabantu abazibandakanya nabo bonke izinhlobo zokuncibilikisa njengama-lotions okuthungwa, ukuthungwa okungenelanga, ukukhishwa kwangaphandle, nokuthungwa kwangaphakathi, ucabanga ukuthi kungaba yini izinzuzo zokucibisa?
Ukuncibilikisa kuyokunika lelo tani legolide elizoshiya wonke umuntu ehlile. Uma ngabe uhlobo lwabantu abathanda ukuma ngaphandle, ukukhishwa kwesikhumba kufanele kube kuhlu lwakho lwamabhakede. Izidumbu zikhokha izinkulungwane zamadola ukuze isikhumba sabo siphuziwe ngoba yilokho okubanika ithonya elikhulu emisebenzini yabo. Thina bobabili singavuma ukuthi isikhumba esibucayi sibonakala sigula futhi sibuhlungu. Kungakhathaliseki ukuthi ungagqoka ikhabethe elihle kakhulu, izinwele ezibukeka kahle namazinyo amhlophe, i-golden tan ingancoma ukubukeka kwakho ngaphandle kokulwela kakhulu.
Uma ungumakhi womzimba futhi uzizwa sengathi umzimba wakho we-toned awuqapheli, kufanele uzame ukushenya isikhumba. I-tan iphakamisa le mikhakha emzimbeni wakho, okwenza ukuzuza kwakho kubonakale ngokwengeziwe. Ubhekene nobunzima futhi unikeza i-gym yakho yonke, kungani ungatholi i-tan ukukuncoma ukubukeka kwemisipha?
Kunezindlela eziningana zokuthola i-tan, kodwa the Isicelo se-PT-141 ithwala usuku. Ukwehliswa okukhulu kwelanga kungabangela umonakalo wesikhumba futhi kubi nakakhulu ukwenze ube nomdlavuza wesikhumba. Enye yezinzuzo ze-PT-141 ukuthi iphephile futhi akunakwenzeka ukuthi ikubangele imiphumela emibi. I-Bremelanotide ikunika i-tan enhle ngoba ithinta ukukhiqizwa kwe-melanin, okubangela ukuguqulwa kwesikhumba. Ngakho-ke uma uhlale ufuna inqubo yokuqothula ephephile futhi okuzokunikeza ngemiphumela emihle, PT-141 (189691-06-3) indlela yokuhamba.
♦ Ukukhethwa Okunamandla
Ingabe ukuthola inselele ukuthola ukulungiswa okunamandla? Awusiye owodwa. Izigidi zamadoda zihlukumezeka ngakho iningi labo lizizwa lihlazo ngisho nokutshela noma ngubani ngalokhu.
Wonke umuntu ufuna ukulungiswa okunamandla nakakhulu. Ngisho nalabo abathokozela ubukhulu babo bepenisidinga badinga ukulingana okuqinile ukuze bajabule ngokocansi. Kuhle uma ufuna ukusetshenziswa okunamandla kokusebenzisa i-PT-141. Kuyinto isithuthukisi esihle sezocansi esizoqinisekisa ukuthi ukulungiswa kwakho kunzima njengedwala.
5. I-PT-141 ye-Dysfunction ngokocansi
(I-1). Uma kuqhathaniswa nezinye izithuthukisi zocansi
I-PT-141 yabelana ngokufana okuningi ngokufana nezinye izithuthukisi zocansi njenge-viagra, kepha kunomehluko omncane futhi. Njengoba kushiwo ngaphambili, i-PT-141 isebenza nge-hypothalamus yingakho ithinta ngqo isifiso sakho sobulili. Ngakolunye uhlangothi, omunye umsebenzi ohlelweni lwamathambo ngokwandisa inani legazi eligeleza emzimbeni wonke, ikakhulukazi izitho zangasese. Izithuthukisi ezinjalo zocansi azikwazi ukubizwa ngokuthi ama-aphrodisiacs.
Ngokusho kokubuyekezwa kwe-PT-141, imiphumela ye-PT-141 ithatha isikhathi esifushane ukuzwa imiphumela. Ngokwesibonelo, abanye besifazane bangase babone izinguquko ezinyangeni ezimbalwa ngenkathi kwabanye, kungathatha amahora. Kuzo zonke, i-PT-141 ingenye yezithuthukisi zocansi ezisebenza ngokushesha ezithinta ukuhlukumeza ngokocansi kungakapheli isikhathi esifushane.
(I-2). Ingabe i-PT-141 ifaneleka kakhulu kwabesifazane?
Njengoba abesilisa nabesifazane basebenzisa i-PT-141, kuye kwabonakala kuyintandokazi yabesifazane. Lokhu kungenxa yokuthi ubanikeza izinzuzo eziningi nemiphumela emibi uma kuqhathaniswa nabanye. Isibonakaliso esisodwa esibachaphazelayo yisisulu sokuhlanza nokuhlanza, okungavamile futhi.
Ukwengeza, abesifazane basabela kangcono kumuthi uma kuqhathaniswa namadoda. I-PT-141 iza njengomsindisi kubesifazane ngoba kunezidakamizwa ezimbalwa ezibhekana nokuhlukunyezwa ngokobulili kwabesifazane.
Indlela evame kakhulu yohlelo lwe-PT-141 ngukujova. Lo mjovo uvame ukuwusizo kokubili amadoda nabesifazane ekwelapheni izinkinga zokuhlukunyezwa ngokocansi.
Izijovo zivame ukuphathwa ngezansi, lapho kunamafutha amaningi. Ngokuvamile, amaphuzu amjovo aphakathi kwesisu nesisu esiswini noma isithanga. I-jabs kufanele inikezwe ngesikhathi esifanayo sosuku ukuze ukwazi ukuthola okungcono kakhulu I-PT-141 isipiliyoni.
Umthamo jikelele we-PT-141 wamadoda nabesifazane yi-2mg, okufanele inikezwe ihora elilodwa ngaphambi kocansi. Uma ukwenza okokuqala, ungafaka i-1mg njengesilinganiso sokuhlolwa ngaphambi kokufaka enye i-1mg imizuzu engamashumi amathathu kamuva.
Ukuze ugweme ukudlula, akufanele udlule i-2mg emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili. Kufanele uhlale ukhetha isikhathi esihle, esilungele wena.
I-PT-141 ye-spray nasal enye indlela evamile yokuphatha i-PT-141. Abantu abaningi bayayithanda ngoba kulula ukuyisebenzisa. Ngokungenelela i-PT-141, ungafinyelela i-libido oyifunayo. Nanka izinyathelo ozithathayo zohlelo lokusebenza lwe-PT-141 lwe-nasal spul;
Vula iphunga lakho ngokucophelela ukuze ususe umuthi womuthi.
Funda yonke imiyalo emaphaketheni ngaphambi kokuyiqondisa. Shake ngaphambi kokusebenzisa bese ugoqa imali encane uma lokho kubonisiwe.
Cindezela kahle ibhodlela bese uphawula umuthi omlomo wakho uvaliwe. Lokho kungasetshenziswa ngenkathi kusesimweni esiqondile ukuze kungadingeki uvuselele ikhanda lakho emuva. Njalo gcina ibhodlela lihlanzekile futhi lihloselwe ukugwema ukungcola.
I-libido yami ibuyela emuva evamile
U-Agnes K uthi, "Ekuqaleni, ngithengile lo mkhiqizo ukukhanda isikhumba. Isikhumba sami siphendule kahle, futhi nganquma ukuqhubeka nokusetshenziswa kwayo. Into eyodwa eyangenza ngithande isipiliyoni se-PT-141 ukuthi yandisa i-libido yomuntu. Bengingacabangi ukuthi i-libido yami izoke ishintshe kusukela ngangizame cishe zonke izithasiselo ezinjengezipilisi zemilingo azitholi lutho. Kusukela ngobusuku bokuqala ngiyisebenzise, ​​isifiso sami siye saba phezulu lapho. Manje ngiyakuthanda nomlingani wami njalo ebusuku. Ngizizwa ngizibuza ukuthi kungani engingazi ngakho ngaphambilini. Ngempela, ngizwa umehluko omkhulu. "
Embalwa imiphumela emibi
ULilian D. uthi, "Ngangilokhu nginezocansi ezinganelisayo uma nje ngikhumbula. I-libido yami isuka kumuntu onamandla ukuze angazi lutho ngisho nangesikhathi sangaphambili. Ngabekwa udokotela nginezinye amaphilisi, futhi ngangizonda imiphumela yaso emibi, ikakhulukazi ukushaya kwenhliziyo nokulala. Nokho, isipiliyoni sami se-PT-141 sinehlukile. Ngivame ukuhlupheka nganoma yimiphi imiphumela emibi, ngisho nakuyo Ukubuyekeza kwe-PT-141 Ngifundile ku-intanethi, bambalwa abantu abaye babhekana nanoma yikuphi. Ngalesi sikhuthazo sezocansi, manje ngiyakwazi ukujabulela ukuphila kwami ​​kocansi ngaphandle kokukhokha inani lokuhlupheka ngenxa yemiphumela emibi eminingi. Siyabonga, PT-141.
Inikeza imiphumela emihle kakhulu
UMaggie S. uthi, "Nginomlutha wokukhanda isikhumba futhi ngikwenze iminyaka eyishumi nanhlanu edlule. Ngacabanga ngokuzama lo mkhiqizo ngemuva kokufunda izibuyekezo ze-PT-141 nokubona ezimbalwa ngaphambi nangemva kwezithombe ezibonisa ukuthi zinganikeza kahle kangakanani ithani lemvelo. Ngimangalisa futhi ngiyajabula ngemiphumela. I-lotions yokuqothula engiyisebenzisayo ingishiyile ngephunga elimnandi, kodwa lokho kuyinto yesikhathi esidlule manje. I-orange hue abanginike yona isiphelile, futhi manje ngibukeka ngendalo. Ngithanda iqiniso lokuthi wonke umuntu ucabanga ukuthi ngizalwa kanje. Zama lokhu, futhi cishe ngeke ubuke emuva. "
Inikeza ama-orgasms amahle kakhulu
UBenjamin Paterson uthi, "Muva nje, umkami wamisa ukuba nama-orgasms, futhi konke engangikuzama kwakubonakala kuthinta idwala. Waba nesithakazelo, futhi ngandlela-thile ngilahlekelwa ukuzethemba kwami ​​ngokocansi ngoba ngangizwa sengathi angikwanelisekile. Ngikhuluma nodokotela, futhi wancoma ukuthi ngizame lokhu. Ngangingabaza ngakho kodwa nginqume isipho umkami ngosuku lwakhe lokuzalwa futhi ngibone ukuthi kuyahamba kanjani. Ngamangala lapho sithola okuhle kulobo busuku. Uvukile ekuthinteni okuncane futhi wangitshela ukuthi wayengenalo i-orgasms enamandla iminyaka eminingi. Ngangizizwa kahle ukuthi ekugcineni, umkami angajabulela ukuthanda kwethu. Sabe sesiyalile ukuthi sizothunyelwa futhi ngeke sikwazi ukulinda. Ngizoyincoma kumuntu onomuzwa wokuthi angeke aphinde abe ne-orgasm. "
UJesica S. uthi, "Lesi sithuthukisi socansi ngumkhiqizo omuhle kakhulu engiwutholile kuze kube manje. Ngaqala ukuya esikhathini lapho ngisemncane ngenxa yesimo sempilo engangihluphekile, futhi izinto azikaze zifane futhi. Ngaphandle kokumelela kwamasinini nokuzizwa ngingakhululekile, ngangihlale ngizwa ubuhlungu ngenxa yokuthi angizange ngijabulele ukwenza ucansi. I-PT-141 ingisizile, ikakhulukazi nge-orgasms yami. Ngizizwa nginamandla futhi njalo ngifuna. Umyeni wami uthi angikaze ngibe lo sexy futhi manje ngifuna ukuyisebenzisa futhi. I-PT-141 yenza umehluko omkhulu empilweni yami yomshado, futhi ngibonga njalo. Kuyafaneleka yonke imali. "
8.Izingozi Emva kokusebenzisa i-PT-141
Abantu abaningi abathatha lesi sidakamizwa, babhekana nokuhle Imiphumela ye-PT-141. Akumangalisi ukuthi bancike kulo ukuphatha ukungasebenzi ngokocansi kanye nokwenyama isikhumba sabo. Nakuba linikeza konke lokhu, kubalulekile ukwazi ukuthi njengalapha kukhona izinzuzo ze-PT-141 ngakho kuyingozi.
Lokho akusho ukuthi kufanele uhlupheke emiphumeleni emibi; Kunalokho, kukhona ingozi yokuthi into engafuneki noma engalindelekile ingenzeka. Abanye bangaba mnene kakhulu ukuthi ngeke uqaphele. Abanye bayahamba phakathi kwamahora amabili okuqala okusetshenziswa kwawo. Nakhu eminye yemiphumela emibi ongayithola uma usebenzisa i-PT-141;
Ukwandisa ubugebengu bobulili- Abanye abantu bangase basebenzise ngalesi sidakamizwa ukuze bahlanganyele ekuhlaselweni ngokocansi kanye nezinye izinhlobo zobudlova ngokocansi. Lokhu kungenxa yokuthi omunye angase angakulungeli ukulawula isifiso sakhe sobulili ngakho-ke aphelele ukwenza icala lobulili.
Isifiso sobulili esingeke siphume- Isifiso esiningi kakhulu sokulala ocansini ngisho nangemva kokuba kube omunye wemiphumela ongase uhlupheke ngemva kokuthatha lesi sidakamizwa.
Ukususa ngokushesha emva kokujova lesi sidakamizwa
Izinkinga zezokwelapha, ezifana nomfutho wegazi ophezulu
Ubuhlungu esakhiweni somjovo- Ukujola kuyaziwa ukuthi kubangela ukungazizwa kahle emva kokuphathwa. Ngokuvamile lokho kuvamile ngokuphelele uma ubuhlungu buba nzima noma isayithi ithola isifo. Ukuze ugweme isenzakalo esinjalo, sebenzisa njalo inaliti oyinyumba ukuze unike umjovo.
Ukutheleleka okuphezulu kokuphefumula
Ukuba nomlingani kufanele kube wonke ama-roses, ama-sweethearts, ama-chocolate, nokuthandana. Uma lokhu kungekhona isimo kuwe, khona-ke ungase uzithole uthola ukukhathazeka, ikakhulukazi uma unenkinga ye-libido. Akukhona kuphela ukuthi ubulili bubalulekile ebuhlotsheni, kodwa luyingxenye ebalulekile yokuphila komuntu. Ukuphila okuhle kocansi kuye kwafakazela ukuthuthukisa inhlalakahle yomuntu wonke futhi kuvimbele umuntu ekuhluphekeni kwezinye izifo futhi.
Uma uzizwa sengathi ubulili bakho buye buba buhlungu, futhi kancane kancane ulahlekelwa intshisekelo, udinga ukutshala imali enjabulweni yakho yobulili. Ekusesheni kwakho okuthile okuzoshisa impilo yakho yocansi, cishe uzothola inqwaba yamathiphu namasu angase angenzi ushintsho. Ngokufaka izithuthukisi zobulili, ungenza ubulili bukhululeke futhi bujabulise.
Namuhla abaningi abakhulisa ubulili emakethe bakuthembisa ukuthi ukwanda kwe-libido nokukhuthazela. Eziningi zalezi zingxenyana zokuthengisa abathengisi basebenzisa njengamacebo okuthengisa.
Eqinisweni, iningi lalezi zindlovu azihlolisiswa ngemithi futhi lokho okutshelweyo kungenzeka ukuthi akulungile. Ngaphambi kokuba ulungiselele isithuthukisi socansi, kufanele uhambe kulowo ophephile kuwe, futhi okuvela kumphakeli othembekile. Ikhwalithi kufanele ibe yinto ephambili kakhulu uma unquma ukubeka isitoreji sakho kubakhungi be-sexual enhancers.
Uma usazibuza ukuthi yisiphi isithuthukisi socansi ukuthenga nokuthi ungayithenga kuphi, khona-ke singakusiza wenze leso sinqumo. Singcono kakhulu Umkhiqizi we-PT-141 ngubani oyokunikeza nge-PT-141 engcono kakhulu yokungasebenzi komzimba ngokocansi. Kungani ungakhulumi nge-sex yakho drive namuhla?
Ukungasebenzi Kwe-Erectile, Issue of Clinics Urologic- E-Book, By Culley Carson
Ukungasebenzi Kwecansi Kwabesifazane, By Marta Meana.
Umsebenzi wesifazane ngokobulili kanye nokungasebenzi, okuhlelwe ngu-Elisabetta Consantini, uDonata Villari, uMaria Teresa Fibcamo
I-2019-10-30 ku-1: 38 pm
Halo, gibt es die Medikament auch in Pulver?
2019-10-31 ku-3: 33 am
Yebo, aber wenn Sie PT141 für sich selbst verwenden, wird der Fertige PT141 empfohlen. I-Es ist PT141 Injektion.
Ukuhlolwa kwe-Acetate ye-2019 Sermorelin: Ukulwa nokuguga nokulahlekelwa kwesisindo!